Ukhuphiswano lwabafundi: Umngeni woYilo lwamawele eDijithali – iGeofumed
Ikhaya/Ukufundisa i-CAD / GIS/Ukhuphiswano lwabafundi: Umngeni woYilo lwamawele eDijithali
EXTON, Pa. - Matshi 24, 2022 - Bentley Systems, Incorporated, (Nasdaq: BSY), inkampani ye-software yobunjineli beziseko ezingundoqo, namhlanje ibhengeze i-Bentley Education Digital Twin Design Challenge, ukhuphiswano lwabafundi olunika ithuba lokuphinda ucinge into yokwenene. -indawo yehlabathi enesakhiwo esiyilwe kusetyenziswa umdlalo wevidiyo odumileyo uMinecraft. Iteknoloji iwele yedijithali imiselwe ukuba sisixhobo esilandelayo esinamandla sef iinjineli zexesha elizayo, kwaye olu khuphiswano lithuba elilodwa lokuba abafundi bayiphonononge ngendlela enobuchule.
Ngomngeni weDigital Twin Design, abafundi banethuba lokudibanisa ukucinga kunye nobuchule babo ngokujonga amawele edijithali. Abafundi baya kusebenzisa iMinecraft ukuthatha indawo yehlabathi yokwenyani kwaye bayile isakhiwo esitsha ngaphakathi kwayo. Ukongeza ekuqatshelweni yiBentley Education, abagqwesileyo be-20 abagqwesileyo baya kufumana i-$ 500. Ophumeleleyo okhethwe ngabagwebi abaziingcali uya kufumana ibhaso le-USD 5.000 kwaye ophumelele udidi lwevoti oludumileyo uya kufumana ibhaso le-USD 2.000.
Umceli mngeni uvulelekile kubafundi abaphakathi kweminyaka eyi-12 ukuya kwengama-25 abavela kwizikolo eziphakathi, kwizikolo eziphakamileyo, kwiikholeji zoluntu/izikolo, iipolytechnics, amaziko obugcisa kunye neeyunivesithi. Abafundi banokuyila izakhiwo ezijongana nemiba efana nokuzinza kokusingqongileyo, ubuhle boyilo lwezakhiwo, kunye nokukhula kwabemi, okanye ukusombulula umngeni othile wobunjineli. Olu yilo lunokuba ngohlobo lwaso nasiphi na isakhiwo esiphezulu, njengesakhiwo, ibhulorho, isikhumbuzo, ipaki, isikhululo sikaloliwe, okanye isikhululo seenqwelomoya.
Ngehlabathi kunye neziseko zalo ezisisiseko ezijongene nemingeni emininzi ekhulayo, iinjineli zexesha elizayo ziya kuguqukela kwitekhnoloji yamawele edijithali ukuzilawula. Ngenxa yokuba amawele edijithali aluphawu lwenyani lwehlabathi lokwenyani, anokunceda ukudibanisa kunye nokubona idatha ukwenza izigqibo ezifanelekileyo kunye nokwenza isicwangciso esisebenzayo kunye nesenzo.
UKatriona Lord-Levins, iGosa eliyiNtloko leMpumelelo yeBentley Systems, uthe: “Lo mceli mngeni uqhubela phambili nomsebenzi weBentley Education wokuqeqesha iingcali zexesha elizayo kwimisebenzi yobunjineli, ukuyila nokwakha. Sifuna abafundi babonise ubuchule babo bokuyila besebenzisa iMinecraft kwaye baphonononge amandla eteknoloji yeBentley iTwin ukuhlangabezana nomngeni ojongene neziseko zophuhliso zehlabathi. Kwaye, ekuhambeni kwethuba, sifuna ukukhuthaza nokukhuthaza abafundi ukuba bafunde ngobunjineli beziseko zophuhliso njengekhondo elinokwenzeka kwaye babaveze kumathuba azayo, ngokufakwa kwedijithali kwiziseko zophuhliso.”
Xa uyilo lwabo lulungile, abafundi baya kuthumela ulwakhiwo njengemodeli ye-3D kwaye bayibeke kwindawo yangempela yehlabathi besebenzisa iqonga le-Bentley iTwin. Abafundi kuya kufuneka kwakhona bangenise isincoko esifutshane esichaza ingqiqo emva uyilo lwabo. Ukuthatha inxaxheba kumngeni, abafundi kufuneka babhalise kwaye bangenise iiprojekthi zabo ngoMatshi 31, 2022. Ukuze ubhalise kwaye ufunde ngakumbi malunga nokungeniswa, iindlela zokugweba, kunye nolunye ulwazi, cofa apha.
Malunga neBentley Education
Inkqubo ye-Bentley Education ikhuthaza uphuhliso lweengcali zeziseko ezingundoqo zexesha elizayo kwimisebenzi yobunjineli, ukuyila kunye nokwakha ngokubonelela ngeelayisensi zokufunda kubafundi kunye nabafundisi bezicelo ezithandwayo zeBentley ngaphandle kweendleko nge-portal entsha ye-Bentley Education. Inkqubo yenzelwe ukudala italente ekumgangatho wehlabathi onokuhlangabezana nemingeni yokuphucula umgangatho wobomi kunye nokutshintsha ngokuqinisekileyo ihlabathi usebenzisa i-Bentley infrastructure engineering software applications and proven learning. Inkqubo ye-Bentley Education iya kunceda abafundi ukuba baphuhlise izakhono zedijithali ezibaluleke kakhulu kwi-pool yetalente efanelekileyo ukuxhasa ukukhula kunye nokomelela kweziseko ezingundoqo kwihlabathi jikelele.
I-Bentley Systems (Nasdaq: BSY) yinkampani yesoftware yobunjineli yeziseko ezingundoqo. Sibonelela ngesoftware evelisa izinto ezintsha ukuqhubela phambili iziseko ezingundoqo zehlabathi, ukugcina uqoqosho lwehlabathi kunye nokusingqongileyo. Izisombululo zethu zesoftware ekhokelayo kwishishini zisetyenziswa ziingcali kunye nemibutho yabo bonke ubungakanani kuyilo, ukwakhiwa, kunye nokusebenza koohola bendlela kunye neebhulorho, uloliwe kunye nokuhamba, amanzi kunye namanzi amdaka, imisebenzi yoluntu kunye nezinto eziluncedo, izakhiwo, kunye neekhampasi. , imigodi kunye nemizi-mveliso. izibonelelo. Iminikelo yethu ibandakanya izicelo ezisekelwe kwi-MicroStation zokwenza imodeli kunye nokulinganisa, i-ProjectWise yokunikezelwa kweprojekthi, i-AssetWise ye-asethi kunye nokusebenza kwenethiwekhi, i-software ye-software ye-Seequent ehamba phambili ye-geoprofessional, kunye neqonga le-iTwin leziseko zamawele edijithali. Bentley Systems iqeshe ngaphezu 4500 oogxa kwaye ingenisa ingeniso ngonyaka malunga 1 yeebhiliyoni zeerandi kumazwe 000.
© 2022 Bentley Systems, Incorporated. I-Bentley, ilogo yeBentley, i-AssetWise, iTwin, iMicroStation, iProjectWise kunye neSeequent ziimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo okanye ezingabhaliswanga okanye iimpawu zeenkonzo zeBentley Systems, eziBandakanyiweyo okanye enye yeenkxaso zayo ezithe ngqo okanye ezingathanga ngqo. Zonke ezinye iimpawu kunye neemveliso.
I-World Geospatial Forum ka-2022-iJografi kunye noBuntu